Amaphoyisa athungatha owesifazane ontshontsha izibonelelo zabahola impesheni | Scrolla Izindaba
Amaphoyisa athungatha owesifazane ontshontsha izibonelelo zabahola impesheni
Ugogo uMashudu Matamela uzondla ngemali yakhe yempesheni yabadala eyi-R1,86 aphinde ondle nabazukulu abathathu nendodana yakhe engasebenzi.
Akukhathaleki ukuthi uyisebenzisa kahle kangakanani imali yakhe, akakwazi ukuqeda inyanga yonke esenayo.
Ngakho-ke ngesikhathi eyokhipha imali yakhe yempesheni ngeviki eledlule ethola ukuthi isela elingathembekile likhiphe yonke imali kwi-akhawunti yakhe yakwaSassa, umndeni wakhe wavele wahlangabezana nezikhathi ezinzima.
Ungomunye wabahlanu abahola impesheni esibaziyo esigodini sase-Halukhwa Mukula – ngaphandle kwase-Thohoyandou e-Limpopo – ababayizisulu zowesifazane owayethi uqhamuka kwa-Sassa futhi esebenza ngemiyalelo evela ehhovisi likaMengameli uCyril Ramaphosa.
Ugogo Matamela oneminyaka engama-78 uthe usathukile futhi udidekile ukuthi kumele enzeni, njengoba engenakho ukudla kanti nogesi usuzophela.
Imali yakhe yempesheni ihlanganisa ukudla kwakhe, ugesi nemali yesikole yabazukulu bakhe.
“Owesifazane osemncane ofake isifonyo nesigqoko weza kimi wangitshela ukuthi uthunywe nguMengameli uRamaphosa ukuthi asinike amaphasela okudla. Kodwa-ke kufanele sibe nomazisi bethu namakhadi esibonelelo.
“Nganginqena ekuqaleni kodwa ngagcina sengimnikeza amaphepha.
“Ungitshele ukuthi ngilande ikhophi kamazisi wami ngithe ngingena nje endlini washintsha ikhadi lami wafaka elinye emvilophini.
“Ngabone ngakusasa ukuthi ungiqolile ngenkathi ngivula imvilophu ngikuthola ukuthi ikhadi elowesilisa omdala wasendaweni.”
Kuvela ukuthi ugogo uMatamela bekungayena yedwa isisulu emtholampilo wendawo lapho bekufanele balande khona amaphasela abo okudla.
“Owesifazane ube eseyithatha yonke imali yami yesibonelelo futhi ngisabhekene nobunzima bokubhekana nalokho okwenzekile.
“Anginalutho ngempela futhi ngingamukela noma yiluphi usizo ukuze impilo iqhubeke.”
UGogo uTshavhungwe Netshivhumbe utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi lo wesifazane uthathe umazisi wakhe kanye nekhadi lakwa-Sassa, wabe esemtshela ukuthi alande amaphasela akhe okudla emtholampilo wendawo.
“Ngabone ukuthi ngiqoliwe ngenkathi ngizama ukukhipha imali edolobheni ngathola u-R20 kuphela usele kwi-akhawunti yami. Ngikhathazeke kakhulu.”
Okhulumela abakwa-Sassa e-Limpopo uZwanda Kutama uthe abamazi lo wesifazane okukhulunywa ngaye futhi basebenzisana namaphoyisa ukuthola umsolwa.
Okhulumela amaphoyisa ase-Limpopo uBrigadier uMojalefa Mojapelo unxuse noma ngubani onolwazi ngaleli cala ukuthi axhumane noSayitsheni uMulalo Singo kule nombolo 071-493-4077 noma athinte i-Crimestop ku-0860010111.